09/03/2018 admintriatra Vaovao Samihafa 0
« Deuxième voyage » hiarahana amin’i Françis sy Gothlieb
Tohin’ny fetin’ny mpifankatia. Taorian’ny seho tetsy amin’ny lapan’ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena Mahamasina, dia averina indray ilay seho hiarahan’i Françis Turbo sy Gothlieb, « Amour’rire », ary nampian’izy ireo hoe « Deuxième voyage ». Tsy hivoana tamin’ny seho tetsy Mahamasina no atolotr’izy mirahalahy etsy amin’ny CCEsca Antanimena ny alahady 11 marsa izao manomboka amin’ny 2 ora sy sasany. Ankoatra ny hatsikana, izay hifangaroan’ny masira sy ny mamy, dia hanana ny anjara toerany amin’io seho io ihany koa ny tontolon’ny hira.
Hikalo ireo hirany malaza i Solo Andrianasolo
Mpanakanto tsy zoviana amin’ny feo mangany sy ny fahaizany mitendry gitara. Hikalo ireo hirany malaza i Solo andrianasolo anio alina manomboka amin’ny 9 ora etsy amin’ny Trass Tsiadana. Maro ireo hiran’ity mpanakanto ity no tsy afaka ambavan’ny maro raha tsy hitanisa afa-tsy ny « Isaky », « Ny hira », « Hasambarana »… Hampiavaka ny seho ny nanasany an’i Bodo hiara-hikalo aminy amin’ireo hira sasany niarahan’i solo nikalo tamin’ny andriambavilanitra. Santionany amin’izany ilay hira « Ry lasako »…
Tsinjaka mafana miaraka amin’i Big Mj
Taorian’ny fivahinianana tany an-dafin’ny riaka, dia manome fotoana ireo mpankafy azy, ary hanolotra tsinjaka mafana etsy amin’ny Jao’s Pub Ambohipo anio alina i Big MJ. Fotoana handrenesana indray ireo hira nentin’ity mpanakanto ity tamin’ireo seho nataony toa ny « Célibataire », « no limit », « anao ndraiky zah »… Hanakoako mandritra ny seho ihany koa ireo hiaka farany navoakany, ary anisan’izany ny « Na lingui you », izay lohateny nampisalorany io hetsika io ihany koa.